5 dị mma Kildare Firesides ileta oge oyi a - n'imeKildare
di na nwunye, Nri na Ṅụọ, Christmas
Beer, nri na ọkụ na-ebigbọ - kedu ihe ọzọ ị ga-achọ iji kpoo cockles n'oge oyi a?
Inwe izu ike site na ọkụ mepere emepe mgbe oyi na-atụ n'èzí bụ echiche anyị maka ọpụpụ oyi zuru oke, yabụ anyị achịkọtala ọkụ ise kachasị mma na Kildare nke anyị chere na ị kwesịrị ịnwale.
Nọdụ n'okirikiri na sofas ndị dị mma ma na-ekpo ọkụ nke ọkụ na-ere ọkụ - ọkụ ndị a mara mma na-eti mkpu ka a na-emeso gị dị ka ebe obibi gị n'èzí.
Nke a ọ bụ akụkụ ọkụ kacha mma na Co Kildare? Ndị K Club mara ka esi eme ekeresimesi na mgbede izu ike site n'ọkụ na-eji iko mmanya mulled ma ọ bụ chọkọleti na-ekpo ọkụ na-ada ka eluigwe ugbu a.
Biputere Killashee (@killasheehotel)
Ị pụghị inwe mmetụta na-ekpo ọkụ na-abịa site na ọkụ ahụ? Kpọkọtanụ nwa agbọghọ ahụ maka tii ehihie ezumike na ịchụkwudo n'ihu nke Killashee ọkụ dị mma. N'ehihie Krismas zuru oke ejiri!
Brennans Kilteel njem nwere ọmarịcha ụlọ mmanya Irish mara mma yana na mgbede ezumike Disemba - kedu ihe ọzọ ị ga-achọ? Gaa maka otu pint ma eleghị anya ị ga-achọ ịnọrọ ise ọzọ. Brennan's dị na Kilteel nwere ike mara nke ọma n'ihi na ejiri ya mee ihe nkiri na ihe nkiri Irish hit show 'Blood' na ntọhapụ na-abịa 'Harry Wild' nke Jane Seymour na-agba.
Biputere Hartes Of Kildare kesara (@harteskildare)
Isi n'ime Hartes na obi ụtọ site n'ọkụ ọ bụla na-anụ ụtọ menu ha pụrụ iche featuring biya brewed na nwanne ha nwanyị ụlọ mmanya Ụlọ igirigi igirigi. Ihe nchịkọta Hartes na-elekwasị anya n'oge, ihe ngosi, ihe ọhụrụ nke a pụkwara ịhụ na mmanya ha meu na oatmeal ha na Chocolate Pale Ale nke bụ ọkacha mmasị.
Biputere Barberstown Castle (@barberstowncastlevenue) kesara
Na-atọ ụtọ site n'ọkụ na-abanye Lọ Barberstown, ọmarịcha ụlọ nke e wuru na narị afọ nke 13. Ikuku dị na nnukwu ụlọ a bụ nke na-enweghị atụ, anyị na-ekwe nkwa na a ga-ahụta ekeresimesi na-agaghị echefu echefu na Barberstown Castle snuggled gburugburu ọkụ mepere emepe.
di na nwunyeNri na ṄụọChristmas